Akụkọ - Ngwakọta ikuku oxygen n'efu 4
Ụlọ ọrụ anyị bụ onye na-eduga na-eweta usoro ngwọta gas compressor gas na-enweghị mmanụ na China, yana ụlọ ọrụ ọkachamara dị elu nke na-emepụta ma na-emepụta compressors na-enweghị mmanụ.Ụlọ ọrụ ahụ nwere usoro ọrụ ịzụ ahịa zuru oke na nyocha siri ike na-aga n'ihu na ike mmepe.Ngwaahịa na-ekpuchi mmanu na-enweghị mmanụ.Igwe ikuku ikuku, ikuku oxygen, compressors nitrogen, compressors hydrogen, carbon dioxide compressors, helium compressors, argon compressors, sọlfọ hexafluoride compressors na ihe karịrị ụdị 30 nke mmiri ọgwụ kemịkalụ gas, nrụgide kachasị nwere ike iru 35Mpa, a na-ejikarị ngwaahịa na petrochemicals, akwa akwa. , nri, ọgwụ, ọkụ eletrik, ígwè, metallurgy, ngwa ụlọ, gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ubi ndị ọzọ.Ugbu a, ọtụtụ ifufe ika mmanụ-free compressors emepụtara anyị ụlọ ọrụ, na e exported na Europe, America, Japan, South Korea, Southeast Asia, karịa 40 mba na mpaghara na Middle East na Africa, na anyị ngwaahịa e. meriri otuto dị ukwuu site n'aka ọtụtụ ndị ahịa, ma guzobe aha ọma nke ọma n'ime obi ndị ọrụ.
Oxygen Compressor na-ezo aka na kọmpat eji eme ka ikuku oxygen wee ghọta njem ma ọ bụ nchekwa.
Enwere ụdị abụọ nke compressors ọgwụ oxygen a na-ejikarị.Otu bụ na ọ dị mkpa ka a rụgide igwe ikuku oxygen na-enye PSA dị n'ụlọọgwụ iji weta ngalaba na ụlọ ịwa ahụ dị iche iche.Ọ na-enye nrụgide pipeline nke 7-10 kg.Ekwesịrị ịchekwa oxygen sitere na PSA n'ime akpa nrụgide dị elu maka ojiji dị mma.Nrụgide nchekwa na-abụkarị 100 barg, 150 barg, 200 barg ma ọ bụ 300 barg.
Ngwa ụlọ ọrụ nke compressors oxygen gụnyere nrụgide nke ikuku oxygen dị ala maka ngwa VSA na igwe igwe igwe, igwe mpempe akwụkwọ na osisi ọgwụgwọ mmiri.
A na-ekewa mkpakọ mkpuchi karama oxygen na-enweghị mmanụ n'ime ụzọ abụọ jụrụ oyi, ikuku na-ekpo ọkụ na mmiri.Ọdịdị kwụ ọtọ.Usoro nke ụlọ ọrụ anyị nke nnukwu nrụgide mmanụ na-enweghị mmanụ oxygen compressors nwere arụmọrụ dị mma, arụ ọrụ kwụsiri ike, arụmọrụ dị elu na nchekwa ike, ogologo ndụ ọrụ, ma na-eji ya eme ihe.Site na ikuku oxygen, teknụzụ kemịkalụ na ikuku oxygen dị elu, yana onye na-emepụta ikuku oxygen, a na-emepụta usoro oxygen dị elu dị mfe ma dị nchebe.
Maka mkpakọ ikuku oxygen na-enweghị mmanụ, a na-eji ihe ndị pụrụ iche nwere ihe na-eme onwe ya ka a na-eme ihe mkpuchi esemokwu dị ka mgbanaka piston na mgbanaka nduzi.
A na-egosipụta uru nhazi n'ime:
1. Usoro mkpakọ dum enweghị mmanu mmanụ dị mkpa, nke na-ezere ohere nke mmanụ na-akpọtụrụ ikuku oxygen dị elu na ịdị ọcha dị elu ma na-eme ka nchekwa nke igwe;
2. Usoro dum enweghị mmanu mmanu na nkesa mmanụ, nhazi igwe dị mfe, njikwa ahụ dị mma, na ọrụ ahụ dị mma;
3. Usoro dum enweghị mmanụ, ya mere ikuku oxygen na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, na ịdị ọcha nke ikuku oxygen na ntinye na ntinye nke compressor bụ otu.
The gas cylinder na-ejuputa oxygen compressor kwesịrị ekwesị maka mbata mgbali 3-4barg (40-60psig) na iyuzucha mgbali 150barg (2150psig)
Usoro 15NM3-60NM3 / elekere obere PSA oxygen ọgbọ na-enye ọrụ ndochi oxygen dị ọcha maka ikuku oxygen nke obodo na obere ụlọ ọgwụ dị n'àgwàetiti, na nkwụsị ikuku oxygen.Ọ nwere ike na-agba ọsọ na-aga n'ihu ruo awa 24, ọ pụkwara iru karịa karama 20 oge ọ bụla.
Atụmatụ nke compressor a
A nakweere mkpakọ nke ọkwa anọ.Ụdị mmiri na-ekpo ọkụ na-eji igwe igwe anaghị agba nchara iji hụ na mmetụta dị jụụ nke compressor na-eme ka ọ dịkwuo mma ma gbasaa ndụ ọrụ nke isi iyi akụkụ.A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri na-eri nri nwere obere nrụgide oriri, na njedebe nkwụsị na-eji ngwaọrụ iyuzucha.Ọkwa ọ bụla nke nchebe nrụgide dị elu, nchebe okpomọkụ dị elu, valvụ nchekwa na ngosipụta okpomọkụ.Ọ bụrụ na okpomọkụ dị oke elu na oke nrụgide, usoro ahụ ga-ama jijiji ma kwụsị iji hụ na ọrụ dị mma.Enwere forklift na ala nke compressor, nke nwere ike ibufe ngwa ngwa na saịtị ahụ.
Ọkọlọtọ oxygen compressor anyị dị elu agafeela asambodo EU CE wee mezuo ihe achọrọ nke ahịa EU.
Anyị nwekwara ike ịnye ndị compressors oxygen ahaziri dị ka ọnọdụ ndị ahịa si dị.
Compressor oxygen anyị nwere njirimara ndị a
1. kpamkpam 100% mmanụ na-enweghị mmanụ, ọ dịghị mmanụ achọrọ, cylinder igwe anaghị agba nchara
2. Kwesịrị ekwesị maka VPSA PSA oxygen isi iyi pressurization
3. Enweghị mmetọ, mee ka ịdị ọcha gas ghara ịgbanwe
4. Ogo dị mma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, na nkwụsi ike dị mma, tụnyere ma dochie ụdị mba ọzọ yiri ya.
5. Ọnụ ego ịzụrụ dị ala, ọnụ ahịa nlekọta dị ala na ọrụ dị mfe.
6. Ndụ ọrụ nke mgbanaka piston n'okpuru ọnọdụ nrụgide dị ala bụ awa 4000, na ndụ ọrụ nke piston mgbanaka n'okpuru ọnọdụ nrụgide dị elu bụ 1500-200 awa.
7. Brand moto, ị nwere ike ezipụta ika, dị ka Siemens ma ọ bụ ABB ika
8. Na-ebunye ahịa ndị Japan iji mezuo ihe ndị Japan na-achọsi ike
9. Dị ka ọnọdụ ọrụ kpọmkwem nke ndị ahịa si dị, a na-emepụta compressor maka nkwụsịtụ nke otu, nkwụsị nke abụọ, nkwụsị nke atọ na nkwụsị anọ.
10. Obere ọsọ, ogologo ndụ, nkezi ọsọ 260-400RPM,
11. Low mkpọtụ, nkezi ụda bụ ihe na-erughị 75dB, nwere ike na-arụ ọrụ nwayọọ na ngalaba ahụike.
12. Na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị arọ na-aga n'ihu, ọrụ kwụsiri ike maka awa 24 na-enweghị nkwụsị (dabere na ụdị a kapịrị ọnụ)